Magnate Group Logistics Co., Ltd - Express Courier Service. Magnate Group Logistics Co., Ltd - Express Courier Service.
Price On Call:+951246681
Business Type agents-and-brokers
About us ( Magnate Group Logistics Co., Ltd. )
Our Services (၀န်ဆောင်မှုများ):
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူများဦးစီး၍ သွက်လက်ရည်မွန်သော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀န်းထမ်းများဖြင့် အကောင်းဆုံးနှင့် အဆင်ပြေဆုံး ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
ဖုန်းဆက်ရုံဖြင့် အမြန်ဆုံးလာရောက်သိမ်းဆည်း/ သယ်ယူပေးခြင်း။
ပေးပို့လိုသော လိပ်စာရှင်ထံသို့ သွားရောက်ပို့ပေးခြင်း။
ပေးဝေပြီးကြောင်းကို Customers များသို့ အကြောင်းပြန်ကြားပေးခြင်း။
အထူးမှာကြားချက် (သို့) သတ်မှတ်ချက်ရှိသော အချိန် (သို့) ပုံမှန်သတ်မှတ်ချက် အချိန်အတိုင်းလာရောက် သယ်ယူပေးပို့နိုင်ခြင်း။
ပေးပို့သောစာ၊ ပစ္စည်းတို့ကို ပျက်စီးပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိစေရန် အထူး ဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
အလေးချိန်၊ အရွက်အစား ကန့်သတ်ချက်မရှိ ပေးပို့နိုင်ခြင်း။
Address: No. 46/47, Myaing Hay Wun Housing, 8th Mile,
Phone: (951) 246681, 246667
E-mail : info@mglexpress.com
Visit our website: http://mglexpress.com